Soo dejisan Java 8.231 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Java
Java – madal software si loo maqli content kaas oo ku qoran luqadda Java programming waxaa a. software waxaa loo isticmaalaa for ballaarinta oo ka mid ah is-dhexgal, muuqaalada multimedia oo ka mid ah web-daalacashada iyo qaab saxda ah ee goobaha qaarkood. Java waxay ka kooban qalabka lagama maarmaanka ah si ay u abuuraan oo bilaabaysa software ama adeegyada kala duwan ee loogu talagalay on salka ah ee Java technology. Sidoo kale software uu leeyahay tiro balaadhan oo ah qalab loogu talagalay sifeynta ee la gelin iyo wax soo saarka.
Expansion ah muuqaalada interactive iyo multimedia oo ka mid ah web-daalacashada
Horumarinta ee software ku salaysan Java-technology
Daahfurka of software by compiler ah
Soo dejisan Java
Faallo ku saabsan Java
Java Xirfadaha la xiriira